“Wasiirka Maaliyaddu Dheg Uma Dhigi Doono Dhaleecaynta Dhaameel-quuteyaasha”. W/Q Siciid Maxamuud Gahayr | ToggaHerer
← Axkaamta Ramadaanta Qaybtii 27aad
Afduube Dilay Afar carruur ah oo ku nool Orlando USA →
“Wasiirka Maaliyaddu Dheg Uma Dhigi Doono Dhaleecaynta Dhaameel-quuteyaasha”. W/Q Siciid Maxamuud Gahayr
Masuulkani wakhti gu’yaal ah ayuu ka tirsanaa shaqaalaha Wasaaradda Maaliyadda, waxaanu markii dambe madax ka noqday Ku-xigeenka Kastanka Cashuuraha ee Kalabaydh. Isaga oo halkaas ka hawlgala ayay isku dhaceen Wasiirkii Maaliyadda Md Cabdicasiis Maxamed Samaale. Weliba dad ka tirsan Wasaaradda ayaa door ka qaatay isku-dhufashada. Intaas kaddib waxa uu waxbarasho u tegay dalka Itoobiya, waxaanu soo diyaariyay shahaadada Masterta. Markaas ayuu banneeyay shaqadii Wasaaradda Maaliyadda. Waxaanu xeraystay shaqo ay Haayadda Adam Smith ka caawinaysay Wasaaradda Maaliyadda, waanu ku guulaystay.
Tallaabooyinka ugu muhiimsan ee uu qaaday waxa ka mid ahaa isku-shaandhayn uu ku sameeyay agaasime-waaxeedyada wasaaradda, waxaanu ahaa masuulkii kowaad ee wax-ka-beddelka ku sameeya qaab-dhismeedka bar-maamulka loo xulay. Qaadashada go’aankaas waxa ku dhiirri-geliyay aqoontii dheerayd ee u lahaa madaxda laamaha wasaaradda uu hagaha ka noqday.
Niman magafeyaal ahaa oo laga beddelay xarumihii ay hannaanka maamulkooda marooriyeen
Dillaaliin hadh iyo habeen jiray maxaafsan jiray xarumaha dawladda, oo waayay macdantii ay u barteen
Wiilal abtinnimo iyo ehelnimo lagu qoray hannaanka shaqaalennimada
Rag adeegsada magacyo qarsoon oo aan is-muujin